छोराछोरीको खुशीमा साटिन्छ खाडीको दुःख | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा छोराछोरीको खुशीमा साटिन्छ खाडीको दुःख
on: २१ असार २०७५, बिहीबार ०८:२२ शिक्षा
छोराछोरीको खुशीमा साटिन्छ खाडीको दुःख
आफ्ना बाबुआमाको साथमै रहेर स्कूले जीवन बिताउने रहर सबैलाई हुन्छ । यस्तै रहर अनिशा भोलन (तमाङ)लाई पनि थियो । तर, भाग्यले सबैलाई उत्तिकै साथ कहाँ दिन्छ र ! पारिवारिक अवस्था नाजुक भएपछि उनका बाबु रोजगारीका लागि खाडी जान बाध्य थिए । तर, अनिशाको बाल मस्तिष्कले भने बाबुको उपस्थिति खोजिरहन्थ्यो । विद्यालयको अभिभावक दिवसमा जब साथीहरू बाबुको साथमा देखिन्थे, अनिशा भने बाबुको यादले निकै उदास बन्थिन् ।
यस पटकको एसईई परीक्षामा देशभरबाट अनिशाजस्तै नियमिततर्फ ४ लाख ५१ हजार ५ सय ३२ जना सहभागी भएका थिए । तीमध्ये धेरैका बाबुआमा उनको जस्तै विदेशिन बाध्य छन् । कुनै महŒवपूर्ण अवसरमा अनिशा विदेशिएका बाबुको यादमा धेरै टोलाउँथिन् । तर यसपटक बाबुआमासँग विद्यालयमा भएको भेट भने निकै उल्लासमय देखिन्थ्योे । नहोस् पनि किन ! सधैंजसो बाबुको यादले हुने उदासीपनलाई अनिशा ऊर्जामा बदल्न सफल भएकी थिइन्, अर्थात् उनले यसपटकको एसईई परीक्षामा जीपीए ४ ल्याइन् ।
सिन्धुलीबाट सर्लाही सर्नु । सर्लाहीबाट काठमाडौं हँुदै कुवेत पुग्नुपर्ने उनको बाबुको बाध्यता दैनिक गुजारा र उनको पढाइका लागि थियो । आफूले शिक्षादीक्षा लिन नपाएका अनिशाका बाबुजस्ता धेरै अभिभावक आफ्नो सन्तानको उज्ज्वल भविष्यको आशा बोकेर विदेशिएका छन् । एसईईको नतीजा आएको बेला बाबुसँग भेट हुनु अनिशाका लागि एउटा सुखद अवसर थियो । अभिभावकसँगै विद्यालय आएकी उनी यसपटक धेरै रमाएकी थिइन् । विद्यालयले आयोजना गरेको बधाई कार्यक्रममा उनले आप्mनो बाबुसँगै खुशी साट्ने मौका पाइन् ।
छोरीले परीक्षा राम्रो गरेको खबरले अनिशाका बाबुलाई बिदा लिएरै स्वदेश आउन मन लागेछ । छोरीको खुशी र विदेशको पीडा एकैपटक महसूस गरिरहेका थिए उनले । खुशीको क्षणमा पनि गम्भीर देखिएका उनले भने ‘अब हाम्रा नानीहरूले खाडीको घाममा पीडा खप्न नपरोस् ।’
यसपालिको एसईई परीक्षामा सहभागीमध्ये जीपीए ४ ग्रेड ल्याउने ७४ जना मात्र छन् । ३.६ देखि ४ ग्रेड प्वाइण्ट (जीपीए) १४ हजार २ सय ३४ जनाले प्राप्त गरेका छन् । ४६ हजार १ सय ३० जनाले ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याएका छन् । पत्रिकामा ३.६ ग्रेड प्वाइण्ट (जीपीए) ल्याएका विद्यालयले विज्ञापनमा लाखौंको खर्च गरेको सङ्केत गर्दै ग्रीनफिल्ड एजुकेशन फाउण्डेशनका प्रिसिपल खड्गबहादुर बस्नेतले भने, ‘स्तरीयताका लागि हामी विद्यार्थीसँगै खुशी हुनेछौं ।’
अनिशाको राम्रो नम्बर ल्याउने तरीका
विद्यालयमा भइरहने परीक्षा र शिक्षकको गाइडलाइनका कारण नै आफू एसईईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल भएको अनिशाले बताइन् । उनले परीक्षाको समयमा मात्र भन्दा पनि लामो समयदेखि तयारी गरेकी थिइन् । ‘९ कक्षादेखि नै तयारीका साथ मेहनत गरेकी थिएँ,’ अनिशाले भनिन् । परीक्षामा प्रश्नको उत्तर दिँदा आफ्नो विचार समेट्दै मौलिक रूपमा दिनुपर्ने र चित्र तथा तथ्य पनि सामेल गर्नुपर्ने अनिशाको अनुभव छ । ‘विद्यालयको वातावरण र शिक्षकको व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरहरूले राम्रो विद्यार्थीसँग तुलना गरेर आशा र ऊर्जा भरिदिनु हुन्थ्यो ।’
अब नयाँ विषय रोज्नेहरूका सवालमा शिक्षाविद् डा. नम्रता पाण्डेको सुझाव छ– नानीहरू जेमा रमाउँछन्, त्यो विषय पढ्ने वातावरण मिलाइनुपर्छ । अगाडिको अध्ययन र विषय छनोट पनि जीपीएकै आधारमा हुने हुँदा एसईईको परीक्षा प्रणाली महŒवपूर्ण रहेको हो । अभिभावकको तर्फबाट हेर्ने हो भने आफ्ना छोराछोरीले पढाइ सकिएपछि राम्रो जागीर पाऊन्, स्वदेशमै होस् या विदेश गएर टन्न पैसा कमाऊन् भन्ने उद्देश्यले रोजाइका र महँगा विद्यालयमा पढाएको पाइन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय गरीबी, व्यवस्थापनको अभाव, स्रोतसाधनको उपयोगमा अज्ञानता, औद्योगिकीकरण, रोजगारीको अभाव र जीवन जिउने वैकल्पिक आधार नहुँदा विदेश पलायन हुने सोच राख्नु सामान्य हुन थालेको छ ।